Taliyaha ciidanka booliska oo gaadiid ku wareejiyay maamulka Jubaland “Sawirro” – Radio Muqdisho
Taliyaha ciidanka booliska oo gaadiid ku wareejiyay maamulka Jubaland “Sawirro”
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeyo Gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud oo uu wehliyo taliye ku-xigeenka ciidanka Jeneraal Bashiir Cabdi Maxamed iyo saraakiil kale ayaa maanta socdaal ku tegay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, iyagoo gaadiid boolis ku wareejiyay Maamulka Jubaland.
Wafdiga taliyaha ciidanka booliska waxaa garoonka diyaaraha ee Kismaayo ku soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Jubaland, waxaana uu taliyaha iyo saraakiisha la socday ay kormeereen saldhigyo magaalada, halkaasi oo uu warbixino kaga dhageystay qaar ka mid ah saraakiisha booliska ee Kismaayo jooga.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee maamulka Jubbaland Maxamed Warsame Faarax (Darwiish) oo lagu wareejiyay furayaasha gaadiidka booliska ah ayaa taliska booliska uga mahadceliyay, isagoo xusay in gaadiidkan ay ku soo beegantahay xilli loo baahnaa.
Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed Sareeyo Gaas Maxamed Sheekh Xasan Xaamud aya sheegay in gaadiidku ay ka koobanyihiin afar, isla markaana uu taliska ugu talagalay inay ku howlgalaan ciidanka booliska.
Dhinaca kale Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa maanta tababar u furay ku dhawaad labo boqol oo askari oo ka mid noqonaya ciidanka booliska, waxaana uu kula dar daarmay inay tababarka ka faa’iideystaan oo ay ugu adeegan wixii ay barteen shacabkooda, isagoo kulan la qaatay Madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud.
Wafdiga uu hogaaminayo Taliyaha ciidanka booliska ayaa inta ay ku suganyihiin magaalada Kismaayo waxa ay kulamo la qaadan doonaan madaxda Maamulka Jubaland.
Wasiirka dhallinyarada oo ka hadlay doorka Wasaaradda uga aaddan dhalinyarada “Sawirro””
Doorka haweenka ee siyaasadda dalka oo laga hadlay